မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2016-03 > ရှောလမုန်မင်းကြီး (အပိုင်း 18) ၏မိုင်းများ
ငါလုပ်ချင်တာကအပြစ်ပဲ။ ငါမကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေထင်ခဲ့တယ်၊ ငါသူတို့ကိုပြောချင်ခဲ့တယ်။ နာမည်ကြီးခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်သည်ချီကာဂိုမှလော့စ်အိန်ဂျလိစ်သို့ခရီးစဉ်တွင်လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှစ်ခုနှောင့်နှေးခဲ့ရသည်။ လေယာဉ်ပျံသန်းလာသောလေယာဉ်ပေါ်တွင်ခြောက်နာရီကြာထိုင်နေသည်။ နောက်ဆုံးသူသည်လေယာဉ်ပေါ်တက်။ သူ၏ထိုင်ခုံပေါ်သို့ပြိုကျသွားသည်။ သူ၏ခရီးဆောင်အိတ်များနှင့်ထိုင်ခုံအောက်တွင်နေရာလွတ်မရှိသောကြောင့်သူ၏လက်ဆွဲအိတ်များပေါ်၌ပေါင်ပေါ်ကျခဲ့သည်။ လေယာဉ်စတင်လှုပ်ရှားလာသည်နှင့်အမျှအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်တံခါးသို့အလျင်အမြန်ရောက်ရှိနေပြီးစင်္ကြံသို့ကျသွားသည်ကိုသူသတိပြုမိခဲ့သည်။ သူမသည်နေရာတိုင်းသို့သွားသောအိတ်အမြောက်အများကိုသယ်ဆောင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပြherနာအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူမ၏အခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အချက်မှာမျက်လုံးတစ်လုံးသည်“ ရောင်ရမ်းခြင်း” ဖြစ်၍ သူမသည်အခြားမျက်လုံးနှင့်ထိုင်ခုံနံပါတ်များကိုမဖတ်နိုင်ပုံရသည်။ လေယာဉ်မယ်တွေကမကြည့်ရသေးဘူး သူသည်ဒေါသထွက်နေဆဲမိမိကိုယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သော်လည်းဟီဘယ်လ်၏ဘုရားသခင်ကသူ့နားရွက်ပေါ်တိုးတိုးလေးတိုးတိုးလေးကြားလိုက်ရသည် -“ ဘီလ်၊ မင်းအတွက်ဒီနေ့ဟာကောင်းတဲ့နေ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ လေကြောင်းလိုင်းများကိုသင်လွမ်းဆွတ်တမ်းတနေသည်၊ လိုင်းများပေါ်တွင်ရပ်။ မုန်းခဲ့သည်။ ယခုမူကားသင်သည်ဤအပူတပြင်းထိုမိန်းမအားထ။ ကြင်နာမှုပြခြင်းဖြင့်နေ့သည်ပိုကောင်းလာမည်ဟုအခွင့်အရေးရှိသည်။ မင်းကိုငါအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးမှာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော့်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းက“ မသေချာဘူး၊ ငါမခံစားရဘူး” လို့ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်အသံတစ်ခုက“ ငါ့ခံစားချက်တွေကအဲဒါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ငါလုပ်နိုင်တာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့” လို့သူကပြောတယ်။ သူထပြီးအတန်းမှာဆင်းသွားပြီးသူမရဲ့နေရာကိုရှာတွေ့နိုင်မလားလို့မိန်းမကိုမေးခဲ့တယ်။ သူမသည်အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ကြောင်းသူသိသောအခါကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ကျသွားသောသူမ၏အိတ်များကိုယူပြီးထိုင်ခုံများသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်၊ သူတို့၏အိတ်များကိုသယ်သွားသည်၊ ထို့နောက်သူသည်ထိုင်ခုံသို့ပြန်သွားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော် ခဏလောက် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နေနိုင်မလား” ဟု ရေးသားထားသည်။ “ကျွန်မ ထိုင်ခုံမှာ ပြန်ထိုင်တဲ့အခါ နွေးထွေးမှုနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုလှိုင်းလုံးတွေက ကျွန်မဆီ ရောက်လာတယ်။ တစ်နေ့လုံး သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ စိတ်ပျက်အားငယ်မှုနဲ့ တင်းမာမှုတွေ ပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်။ ငါ့ရဲ့ ဖုန်ထူတဲ့ ဝိညာဉ်တွေ ဖြတ်သန်းလာတဲ့ ပူနွေးတဲ့ နွေရာသီ မိုးရေကို ငါ ခံစားလိုက်ရတယ်။ 18 နာရီအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းခံစားခဲ့ရတယ်။” သု 11,25 (EBF) မှန်သည်- "ကောင်းမှုပြုခြင်း နှစ်သက်သောသူတို့သည် ချမ်းသာစွာ နေရကြကုန်၏၊ ရေလောင်းသောသူတို့သည်လည်း မိမိတို့ကိုယ်ကို ရေလောင်းကြလိမ့်မည်။"
ဘုရင်ရှောလမုန်သည်ဤစကားများကိုစိုက်ပျိုးရေးမှရုပ်ပုံဖြင့်ချေးယူခဲ့ပြီးမည်သူမဆိုရေကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရေလောင်းသင့်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ သူသည်ဤစကားများကိုရေးသားစဉ်က၎င်းသည်ပုံမှန်လယ်သမားတစ် ဦး အလေ့အကျင့်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။ မိုးရာသီတွင်မြစ်များဖြတ်ကျော်လာသောအခါမြစ်ကမ်းနားအနီးရှိလယ်သမားများသည်ရေကိုကြီးမားသောရေလှောင်ကန်ထဲသို့စီးဆင်းစေသည်။ ထို့နောက်မိုးခေါင်ချိန်တွင်ကိုယ်ကျိုးစွန့်လယ်သမားသည်ရေလှောင်ကန်မရှိသည့်အိမ်နီးချင်းများကိုကူညီသည်။ ထို့နောက်သူသည်သော့များကိုဂရုတစိုက်ဖွင့ ်၍ အသက်ရေကိုအိမ်နီးချင်းများ၏လယ်ကွင်းသို့ပို့ဆောင်သည်။ အခြားမိုးခေါင်မှုဖြစ်လျှင်ကိုယ်ကျိုးစွန့်လယ်သမားသည်မိမိကိုယ်ကိုရေအနည်းငယ်သာရရှိသည်သို့မဟုတ်ရေလှောင်ကန်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည့်အိမ်နီးချင်းလယ်သမားများသည်သူ၏လယ်ယာမြေများကိုရေထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်သူ၏ကြင်နာမှုကိုဆုချလိမ့်မည်။
တူညီသောပမာဏ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ဘုရားသခင်ပြန်ပေးနိုင်အောင် ယူရို 100 လှူဒါန်းခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ဤစကားသည် စေတနာရှိသူများ ရရှိသောအရာကို ရှင်းပြခြင်းမဟုတ်ပါ (ငွေရေးကြေးရေးအရသော်လည်းကောင်း၊ ရုပ်ပစ္စည်းအရသော်လည်းကောင်း) မရှင်းပြဘဲ၊ ဆော်လမွန်က ဤသို့ဆိုသည်– “ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်သောသူတို့သည် ချမ်းသာရကြလိမ့်မည်။ "satiate / refresh / prosper" ဟူသော ဟေဗြဲစကားလုံးသည် ငွေကြေး သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများ တိုးမြင့်လာမှုကို မဆိုလိုပါ၊ သို့သော် စိတ်ဓာတ်၊ အသိပညာနှင့် ခံစားချက်တို့၌ ကြွယ်ဝမှုကို ဆိုလိုသည်။
In 1. ရှင်ဘုရင်များတွင် ပရောဖက်ဧလိယနှင့် မုဆိုးမ၏ပုံပြင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရသည်။ ဧလိယသည် ဆိုးသွမ်းသောဘုရင်အာဟပ်၏လက်မှ ပုန်းအောင်းနေပြီး၊ ဇာပတ်မြို့သို့သွားရန် ဘုရားသခင် ညွှန်ကြားထားသည်။ ဘုရားသခင်က “မင်းကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ဟိုမှာ မုဆိုးမတစ်ယောက်ကို ငါမှာထားတယ်” ဧလိယ​မြို့​ကို​ရောက်​တဲ့​အခါ၊ ထင်း​ကောက်​တဲ့​မုဆိုးမ​ကို တွေ့​ပြီး မုန့်​နဲ့ ရေ​တောင်း​တယ်။ သူမဤသို့ပြန်ပြောသည်– “သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား အသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ငါ့၌မီးဖုတ်စရာအလျှင်းမရှိ၊ အိုးထဲရှိမုန့်ညက်လက်တစ်ဆုပ်စာနှင့် အိုးထဲရှိဆီအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ ငါ သစ်လုံးတစ်တုံး နှစ်ခုလောက် ကောက်ပြီး အိမ်ပြန်ပြီး ငါ့သားကို စားလို့ရအောင် ပြင်ချင်တာ။"1. ဘုရင်များ ၁7,912) ။
ဘဝသည်မုဆိုးမအတွက်ခက်ခဲလွန်း။ အရှုံးပေးခဲ့ရသည်။ သူမသည်သူမရှိသည့်ကလေးငယ်နှင့်လူနှစ် ဦး ကိုသုံးယောက်စလုံးကျွေးမွေးရန်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဖြစ်နိုင်ပါ။
ဧလိယကလည်း၊ မစိုးရိမ်နှင့်။ သွား၍ပြောသည်အတိုင်း လုပ်ပါ။ ငါ့ကို အရင်ဦးစွာ ဖုတ်၍ ငါ့ထံသို့ ထုတ်ခဲ့လော့။ သင်နှင့် သင့်သားသည် နောက်မှ မုန့်ဖုတ်ရမည်။ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ အိုး၌ရှိသော မုန့်ညက်ကို မစားရ။ ထာဝရဘုရားသည် မြေကြီးပေါ်မှာ မိုးရွာစေသောနေ့မှတပါး၊ ဧလိယပြောသည်အတိုင်း သွား၍ပြုလေ၏။ သူနဲ့ သူ့သားလည်း တနေ့ပြီးတနေ့စားတယ်။ ဧလိယအားဖြင့် မိန့်တော်မူသော ထာဝရဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း၊1. ဘုရင်များ ၁7,13(၁၆) မနက်ရော ညနေရော နေ့ရောညပါ အပြင်ထွက်တဲ့အခါ မုဆိုးမက သူ့အိုးထဲမှာ ဂျုံမှုန့်နဲ့ ဆီဘူးကို တွေ့တယ်။ တောင်းဆိုချက်များ 11,17 “ကြင်နာခြင်းသည် သင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို ကျွေးမွေးသည်” ဟုဆိုသည် (အသက်တာသစ်။ သမ္မာကျမ်းစာ)။ သူမ၏ "ဝိညာဉ်" သည်သာမက သူမ၏ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပါ ကျွေးမွေးခဲ့သည်။ သူငယ်ကို ပေးသဖြင့်၊
“တစ်စုံတစ်ယောက်က အများကြီး လက်ကမ်းပြီး အမြဲတမ်း ပိုရှိနေတယ်။ အခြားသောသူသည် ယုတ်ညံ့၍ဆင်းရဲသော်လည်း၊” (သု 11,24) ငါတို့သခင်ယေရှုသည် ဤအကြောင်းကို သိတော်မူသည်– “ပေးလော့။ အပြည့်၊ ဖိထား၊ လှုပ်ခါပြီး လျှံနေတဲ့ အတိုင်းအတာကို မင်းရင်ခွင်မှာ ပေးလိမ့်မယ်။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တိုင်းသောအတိုင်းအတာနှင့် ထပ်၍တိုင်းလိမ့်မည်။” (လု 6,38) အချိန်တွေမှာလည်း ဖတ်ပါ။ 2. ကောရိန္သု 9,6-၁၅!
ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို အမြဲလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ကြှနျုပျတို့သညျ ကြှနျုပျတို့သညျ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့၏ ကြှနျုပျတို့ ၏ ကြှနျုပျတို့ ရောနှော လိုသညျ။ လိုအပ်ချက်တိုင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မတုံ့ပြန်နိုင်ပါ။ တောင်းဆိုချက်များ 3,27 ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ညွှန်ကြားသည်– “လိုအပ်နေသူများအား ကျေးဇူးပြုရန် ငြင်းဆန်ခြင်းမပြုပါနှင့်၊ သင်၏လက်သည် တတ်စွမ်းနိုင်လျှင်”။ ဆိုလိုသည်မှာ လူအချို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီကို မထိုက်တန်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ သူတို့သည် ပျင်းရိပြီး ကိုယ့်ဘဝအတွက် တာဝန်မယူလိုသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ အကူအညီနဲ့ စေတနာကို အခွင့်ကောင်းယူကြတယ်။ ကန့်သတ်ချက်တွေကို သတ်မှတ်ပြီး ကူညီဖို့ ငြင်းဆန်မနေပါနဲ့။
ဘုရားသခင်က သင့်အား မည်သည့်အရည်အချင်းများနှင့် လက်ဆောင်များ ပေးခဲ့သနည်း။ မင်းမှာ တခြားသူတွေထက် ပိုက်ဆံနည်းနည်းပိုရှိလား။ မင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးလက်ဆောင်တွေက ဘာလဲ။ ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း? အားပေးမှုလား? ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်စုံတစ်ဦးအား ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြွယ်ဝမှုဖြင့် အဘယ်ကြောင့် မလန်းဆန်းကြသနည်း။ အစွန်းဆုံးမှာ ပြည့်နေတဲ့ ရေလှောင်ကန်ကြီး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ငါတို့သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်အံ့၊1. ဓာတ်ဆီ 3,9) ကိုယ်တော်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကို သစ္စာရှိရှိဝေမျှပြီး အခြားသူများကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်နိုင်ပုံကို ပြသရန် ဘုရားသခင်ထံ တောင်းဆိုပါ။ ဤရက်သတ္တပတ်အတွက် ရက်ရောမှု၊ ကြင်နာမှုနှင့် သနားကြင်နာမှုတို့ကို သင်ပြသနိုင်သူတစ်ဦးရှိပါသလား။ ဆုတောင်းခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အားပေးစကားများအားဖြင့်၊ သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦးကို ယေရှုထံ ချဉ်းကပ်စေခြင်းဖြင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ အီးမေးလ်၊ စာတိုပေးပို့မှု၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ စာတိုပေးပို့မှုဖြင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
မြစ်ကမ်းနံဘေးရှိလုပ်သားများနှင့်တူပါစေ။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်သူ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းစီးဆင်းမှုသည်သင့်ကိုစုပ်ယူပြီး၎င်းတို့ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပါစေ။ ရက်ရက်ရောရောပေးကမ်းခြင်းကအခြားသူများကိုကောင်းချီးပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုစီးဆင်းရန်ဘုရားသခင်နှင့်စည်းလုံးသောအခါသင်၏အသက်တာ၌ ၀ မ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းစီးဆင်းလိမ့်မည်။ အခြားသူများကိုလန်းဆန်းစေသူတို့သည်မိမိတို့ကိုလန်းဆန်းစေလိမ့်မည် တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဘုရားသခင်ကဇွန်းထဲထည့်ပြီးငါဇွန်းချလိုက်တယ်။ ဘုရားသခင်မှာအကြီးမားဆုံးဇွန်းရှိတယ်။